HDD SSD ကို Partition ခွဲဆော့ဝဲ Manager က Tool ကို | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
သြဂုတ်လ 31, 2017 admin ရဲ့ လြှောကျလှာ, မောင်းသူ 0
သင့်ကို Power ပြန် Give hard Disk ကို စီမံခန့်ခွဲမှု
ငွေရတတ်သောသူ-featured partition ကိုမှော်, disk ကိုအသုံးပြုမှုပိုကောင်းအောင်နှင့်သင့်ဒေတာတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသော. ဒါဟာသင်လုံးဝ Hard disk နဲ့ partition ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်နှင့်အတူဤမျှလောက်များစွာသောအစွမ်းထက် features တွေနှင့်အတူကြွလာ. ယင်း၏အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ interface နဲ့ရိုးရှင်းတဲ့လမ်းညွှန်မှုနှင့်အတူ, သငျသညျ partition ကိုအရွယ်အစားပြင်ဆင်ရန်နိုင်ကြသည်, မိတ္တူ disk ကို, ဆုံးရှုံးသွားသော partitions ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေး, နှင့် OS ကိုပြောင်းရွှေ့ SSD ကို အလွယ်တကူနှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာ.
Software များ Feature ကို >>>
~ System ကို Partition ခွဲတိုးချဲ့ ယင်း၏အားဖြင့်နိမ့် disk space ကိုပြဿနာဖြေရှင်းဖို့စနစ်က partition ကိုတိုးချဲ့ “Move / Partition ခွဲအရွယ်အစားပြောင်းပါ” & “Partition ကိုတိုးချဲ့” အင်္ဂါရပ်များ.
Copy ကူး Disk ကို Partition ခွဲ ~ hard drive ကိုအဆင့်မြှင့်တင်မှုအတွက်သို့မဟုတ်သင့်ကွန်ပျူတာပြဿနာတစ်ခုထဲသို့ပြေးစေခြင်းငှါအမှု၌ data တွေကို backup လုပ်ထားဘို့မိတ္တူ disk ကို partition ကို.
ပျောက် partition ကို Recover / ~ ကပ်လျက်အခနျးကနျ့ပေါင်းမည် အဆိုပါအသုံးမပြုတဲ့နေရာအပြည့်အဝအသုံးချမှသကဲ့သို့လုံခြုံစိတ်ချစွာပိုကြီးတဲ့တစျခုသို့နှစ်ခုကပ်လျက် partitions ကိုပေါင်းစပ်.
~ SSD ကိုမှ OS ကိုပြောင်းရွှေ့ system ကိုပွနျလညျထူထောငျအတှကျပိုမိုကောငျးကွန်ပျူတာစွမ်းဆောင်ရည်အရသို့မဟုတ် OS back up လုပ်ထားဖို့ SSD ကို / HD ကိုမှ OS ကိုပြောင်းရွှေ့.
Surface ကစမ်းသပ် ~ ပစ်မှတ်တည်နေရာအပေါ်မကောင်းတဲ့ကဏ္ဍများရှိပါတယ်ရှိမရှိအတည်ပြုပေးရန် disk ကို / partition ကိုမျက်နှာပြင်စမ်းသပ်စစ်ဆေး.
အခြေခံပညာစီမံခန့်ခွဲမှု ~ ထိုကဲ့သို့သောဖန်တီးအဖြစ် disk ကို partitions ကိုစီမံခန့်ခွဲရန် Enable, delete, ပုံစံ, ကွဲ, သုတ်, partition ကို align နှင့်ပိုပြီး.
Disk ကို Partition ခွဲဇယား ~ ပြောင်း GPT မှ MBR ကနေ Non-system ကို disk နဲ့အပြန်အလှန်ကြီးမားသော drive ကိုသို့မဟုတ်အပြည့်အဝ OS ကိုထောကျပံ့ဖို့ဒေတာကိုအရှုံးမရှိဘဲပြောင်း.
File System ~ ပြောင်း FAT မှ NTFS ပြောင်းသို့မဟုတ်အစောပိုင်း Windows အတွက် OS ကို support လုပ်ဖို့သို့မဟုတ်ကြီးမားသောဖိုင်တွေသိမ်းထားဖို့ပုံစံမပါဘဲ NTFS မှ FAT convert.
မူလတန်း Set / logical ~ ကတက်ကြွအောင်လေးခု partitions ကိုသို့မဟုတ် set partition ကိုမူလတန်းထက်ပိုမိုဖန်တီးပေးရန်ယုတ္တိ partition ကို Set.
HDD Tool ကို Download လုပ်ပါ >>> (အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်း)
mini ကို Tool ကို – ဤနေရာတွင် Download လုပ်
partition လက်ထောက် – ဤနေရာတွင် Download လုပ်
ပိုများသော HDD / SSD ကိုအင်ဖို, ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
အားဖြင့် OS ကို-STORE ပံ့ပိုးမှု
partition ကို mode ကို partition ကို GPT မှ MBR ပြောင်းလုပ်နည်း
ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ OS ကို-STORE ပရိုဆက်ဆာ processor ​​ကို မိုဘိုင်းဖုန်း Software များ HTC က 64-နည်းနည်းက Windows Samsung က ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Nokia က HD Graphics device ကိုမော်ဒယ် နည်းပညာ ဥပဒေရေးရာအနက် စီပီယူ စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Intel က Technology_Internet
64-နည်းနည်းက Windows မိုဘိုင်းဖုန်း Intel က Server ကို Nokia က Sony Ericsson က OS ကို-STORE processor ​​ကို စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု စမတ်ဖုန်းများ HTC က Intel က Samsung ရဲ့ Galaxy နည်းပညာ Technology_Internet Samsung က Qualcomm မှ ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Software များ HD Graphics ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် device ကိုမော်ဒယ် ဥပဒေရေးရာအနက် စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ ပရိုဆက်ဆာ စီပီယူ